Imisa dumar ah ayaa ka qeyb qaadata qurxinta Priyanka Chopra ? - iftineducation.com
Imisa dumar ah ayaa ka qeyb qaadata qurxinta Priyanka Chopra ?
iftineducation.com – Jariirad kasoo baxda Mareeykanka, ayaa baahisay Sawirada aktarada Priyanka Chopra oo ay ilaa 4 dumar ah ka qeyb qaadanayaan qurxinteeda, xili ay isku diyaarineysay ineey duubto qeyb kamid ah Filimkeeda Hollywoodka Baywatch.
Sida uu baahiyay Pinkvilla, Priyanka oo 33 jir ah, ayaa kasoo muuqatay iyadoo Kursi ku fadhida islamarkaasina ay 4 dumar ah ka qeyb qaadanayaan qurxinteeda, mid ayaa Cidiyaheeda ku mashquulsan, midna Tinta, sidoo kale mid kamid ah Dumarka ayaa kor ugu haysa Laptobkeeda.
Halkaan ka daawo Sawirada: